Vivo V19 Neo ayaa ku dhawaaqay: Qadka dhexe ee cusub oo leh Android 10 | Androidsis
La Shirkadda Shiinaha ee Live waxaad ku soo bandhigtay taleefan cusub wadankaaga hooyo loo yaqaan Vivo V19 Neo, Taleefan ayaa loo tixgeliyey inuu yahay mid dhexdhexaad ah sababtoo ah processor-ka isku-dhafan. Waxay u iftiimaysaa astaamaheeda farsamo, sida in ay noqon karto taleefan casri ah oo baahi weyn loo qabo marka uu soo baxo maalmaha soo socda.
Waxay ku socotaa bogga soo-saaraha oo muujinaya wax walba si faahfaahsan oo weyn, xitaa taasna waxay ku tusaysaa Waxay leedahay akhristaha sawirka faraha, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu doorto taleefanka. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay la imaaneysaa lakabka caadada u ah nidaamka ugu dambeeya ee Android mar haddii laga soo saaro sanduuqa.
1 Vivo V19 Neo, dhammaan astaamaheeda
Vivo V19 Neo, dhammaan astaamaheeda
Waxaan ku noolahay V19 Neo waa nooc kale oo dheeri ah Vivo V19 Pro, laakiin sidoo kale waxay la timaadaa dhiirigelin ahaanshaha joogitaanka khadka Vivo X50. Waa qalab yeelan doona hadaf weyn inuu ku soo galo Filibiin xoog leh, waddanka imaan doona ugu horreyn toddobaadka soo socda oo leh qiime dhexdhexaad ah.
Waxay leedahay shaashad 6,44-inji ah oo ah nooca Super AMOLED Ultra O oo leh Full HD + qaraar iyo akhristaha sawirka faraha oo lagu dhex daray guddiga. Waxaa la go'aansaday in la dhejiyo processor-ka Snapdragon 675, 8 GB oo RAM ah, 128 GB oo keyd ah oo ay ku jiraan batari dhan 4.500 mAh oo leh awood xawli ah 18W.
Waxay kuxirantahay qaabeynta kamarad L-qaabeeyaLaga bilaabo dareeraha MP 48, kan labaad waa muraayad 8 MP ah oo aad u ballaaran, 2 MP makro, iyo a 2 MP sensor sensor. Kamaradda is-qaadista ah waa 32 MP oo leh laba qaab oo sida ugu fiican looga soo saaro. Waa terminaal 4G ah oo ay ugu wacan tahay processorkiisa, marka lagu daro isku xirnaanta Wi-Fi, Bluetooth, GPS, iyo isku xirnaanta kale. Software-ka waa Android 10 oo leh lakabka Funtouch OS 10.
Waxaan ku noolahay V19 Neo
MUUQAAL 6.44-inch Super AMOLED Ultra O oo leh xal buuxa HD +
PRORESOR Octa-core Snapdragon 675
KAAMI HOR 32 MP dareeraha leh Super Night iyo Super Night Selfie mode
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh Funtouch OS 10
Isku xirnaanta 4G - Wi-Fi - Bluetooth - GPS
MUUQAALO KALE Shaashadda shaashadda akhristaha
El Waxaan ku noolahay V19 Neo Horayba waxay ugujirtaa dalab ahaan bogga soo-saaraha qiimaha PHP17,999 (qiyaastii 320 euro isbeddelka). Wuxuu ku yimaadaa laba midab: Admiral Blue iyo Crystal White.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo V19 Neo ayaa ku dhawaaqay: Mid dhexdhexaad ah oo cusub oo leh Android 10
Ciyaaraha Line-ka waxay sii deynayaan geesiyaal cajiib ah oo cajiib ah oo leh waxyaabo badan oo RPG ah, Nakhshad iyo Naqshad Qaali ah